Masks, Lederhosen, na biya dị mma na ụgbọ elu Air Canada Toronto ọhụrụ na Munich
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Masks, Lederhosen, na biya dị mma na ụgbọ elu Air Canada Toronto ọhụrụ na Munich
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
A ga-ahapụ ndị Bavaria ka ha banye n'ụgbọ elu Air Canada 77-9 Dreamliner na-abịanụ na klaasị atọ niile yi Lederhosen ma ọ bụ Dirndl.
Lederhosen bụ nke ejiri akpụkpọ anụ mee ya, nke na -eme ka ọ dị mfe nhicha na iwepụ unyi na uzuzu, mgbe ọrụ ụbọchị siri ike gasịrị. Ya mere, Lederhosen bụkarị uwe eji arụ ọrụ nke na-ebu ọdịbendị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ọdịbendị na mba ndị na-asụ German. Ha na -ewu ewu na Bavaria, ha na -ebuli nku anya na Germany ndị ọzọ, mana ekwesịrị ka echebara ya echiche na Ontario ma ọ bụ Canada ndị ọzọ.
N'ịgbaso ọkwa Gọọmentị Canada imeghe mba ụwa na Septemba 7, Air Canada kpughere nkọwa ndị ọzọ
nke atụmatụ ụgbọ elu Munich (MUC) - Toronto (YYZ).
Mwepu mmachi na-enyere ndị mba ọzọ aka ịgba ọgwụ mgbochi nke gọọmentị Canada nabatara nke ọma (Moderna, Pfizer, AstraZeneca, na J&J) opekata mpe ụbọchị iri na anọ gara aga na ndị na-emezu ihe ndị chọrọ maka ịbanye Canada maka njem na-adịghị mkpa.
Germany na-enyekwa ohere ka ndị Canada gbara ọgwụ mgbochi ọrịa ma ọ bụ ndị nwere ike igosi nnwale COVID na-adịghị mma ịbanye na Germany na mpaghara Schengen.
Yiri Lederhosen maka ụmụ nwoke na Dirndl maka ụmụ nwanyị mgbe ị na-efe efe na-akwụsịghị akwụsị site na Bavarian Capital City nke Munich gaa Toronto ga-ekwe omume na-enweghị iweli nku anya site n'aka ndị German n'obodo ndị ọzọ na-abụghị Bavaria dị ka Frankfurt.
Ọtụtụ ndị nọ na Ontario, Canada na -ahụ Octoberfest n'anya ma na -ese onyinyo ndị Germany yi akwa, akwa lederhosen, na okpu ndị German, nke a na -ahụ dị ka uwe Bavarian Germanfest Octoberfest.
Lufthansa na-ejikọ ụgbọ elu na-akwụsịghị akwụsị na Germany na Canada, mgbakwunye nke onye mmekọ Star Alliance Air Canada ịmaliteghachi ụzọ ya site na Munich na-akwụsịghị na Toronto ga-agbakwunye na ntụrụndụ na ahịa azụmaahịa a dị mkpa.
Munich, Frankfurt, na ọdụ ụgbọ elu Europe ndị ọzọ dị ka Vienna, Zurich, Amsterdam, Brussels, na Paris na-ejikọ ụgbọ elu na-ejikọ kpọmkwem na otu na Canada.
Ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ elu na njikọ aka dị iche iche na -asọmpi n'ahịa a. Tụkwasị na nke a, ndị na-ebu ọnụ dị ala na ndị na-ebu akwụkwọ ikike dị ka Condor na-enye ahịa German Canada n'ọdụ ụgbọ elu dị iche iche na Germany na mba ndị agbata obi.
Isi ọdụ ụgbọ elu dị na Germany ka ga -adị FRAPORT (Frankfurt), mana Munich dị na Steeti Ndịda Yurop nke Bavaria bụ ebe abụọ kacha mkpa jikọọ Germany na ụwa
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọdụ ụgbọ elu niile nwere njikọ na sistemụ ụgbọ oloko ICE, na -enye ohere ijikọ nnukwu obodo German na ọdụ ụgbọ elu n'ime awa na ọsọ gafere 200 km/h.
“Dị ka mmachibido njem na -adị mfe n'ofe ụwa niile, anyị na -agba mbọ iwughachi netwọkụ ụwa anyị wee gaa n'ihu dị ka onye na -ebu ụwa na -ejikọ ụwa na Canada. Ebe ndị Europe na-achọsi ike ịlaghachi Canada ọzọ, anyị dị njikere ijikọ ndị ahịa na ezinụlọ ha na ndị enyi ha, ”Jen-Christophe Hérault, onye njikwa mpaghara mpaghara Germany, Switzerland, Austria & Eastern Europe na Air Canada kwuru.
Dị ka ụgbọ elu niile, ụbọchị ndị a mkpali nke Air Canada na ọdụ ụgbọ elu Munich dabere na ọnọdụ taa.
Yabụ, Air Canada gbakwụnyere na mwepụta mgbasa ozi ya: “Rịba ama na enwere ike ịhazigharị azụmaahịa azụmahịa Air Canada dịka achọrọ dabere na ọnọdụ COVID-19 na mmachi gọọmentị. Ndị njem bụ ọrụ ịhụ na ha zutere ihe niile
chọrọ nbanye gọọmentị, gụnyere ijigide akwụkwọ njem njem ziri ezi, visa, asambodo ahụike ọ bụla achọrọ, yana ntozu ndị ọzọ niile maka ụgbọ elu ọ bụla ha zụrụ. Maka ozi kacha ọhụrụ, biko gaa na ọdụ ozi anyị ma ọ bụ webụsaịtị Timatic nke IATA. Iwu njem: Jiri obi ike debe akwụkwọ.
Ihe gọọmentị chọrọ nwere ike gbanwee na obere ọkwa